R/wasaare ku xigeenka dalka oo xarigga ka jaray xarunta JOCC oo la dayactiray – Somnews
R/wasaare ku xigeenka dalka oo xarigga ka jaray xarunta JOCC oo la dayactiray
By somnews	 On Dec 3, 2015
R/wasaare ku xigeenka dalka ayaa xarigga ka jaray xafiis cusub oo loo sameeyay howlgalka ciidamada wadajirka ah ee JOCC.
Munaasab balaaran oo lagu maamuusayay furitaanka xarunta cusub ee JOCC ayaa waxaa ka qeybgalay R/wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte. Wasiirka amniga gudaha, Wasiirka Gaashaandhigga, taliyaha ciidanka Asluubta, abaanduulaha ciidanka XDS, gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo amniga, saraakiil ciidan iyo Danjirayaasha wadamada UK iyo Sweden.
R/wasaare ku xigeenka ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka XDS iyo kooxda Bambeyda, iyadoo heeso wadani ah oo aad u qiiro badan ay halkaasi ku soo bandhigay koox fanaaniin ah.
R/wasaare ku xigeenka ayaa ku soo wareegay qeybaha ay ka koobanyahay xaruntaasi cusub ee loo diyaariyay JOCC, isagoo warbixin ku saabsan waxqadka xafiisyaasi ka dhageystay saraakiisha kala duwan ee JOCC.
Danjiraha dowadda UK ee dalkeena Soomaaliya oo munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in dowladda Britain ay kaalin wax ku ool ah ka qaadatay diyaarinta xarunta JOCC, iyadoo rajeeysay in howlgalka JOCC uu ku baaho gobollada kala duwan ee dalka.
R/wasaare ku xigeenka dalka mudane Maxamed Cumar Carte oo isagu xarigga ka jaray xaruntaasi ayaa ku amaanay dowladaha Britain iyo Sweden doorka ay ka qaateen diyaarinta xafiiskan, isagoo hoosta ka xariiqay in howlgallada wada jiraka ah ee JOCC ay gacan ka geysan doonaan adkeynta amniga caasimadda dalka ee Muqdisho.
Wafdi ka socda Soomaaliya oo ka qayb galey shirka Waddamada Faqriga Viena,Austria